ဟွာဝေး P9 Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
ဟွာဝေး P9 Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ P9 Plus အား Huawei ကယနေ့အထိဖန်ဆင်းတော်မူပြီကိုအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် ... သင်က Nexus 6P မတွက်ပါလျှင်. ဒါဟာ P9 ၏အနိုင်ရတဲ့ဖော်မြူလာကြာင့်ကနည်းနည်းထပ်ပြောသည်.
တရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့စူပါအရွယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည်ကြီး, ပျော်စရာကကင်မရာနှင့်အတူ, မြတ်သော selfies, snappy စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အစိုင်အခဲဘက်ထရီသက်တမ်း – ထိုသို့စိတ်ကြိုက်က Android အကြောင်းပဲအရှက်ကွဲခြင်းရဲ့
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဟွာဝေး P9 Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်: Sub-တန်းတူဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုကျောကျင်းပမြင့်မြင့်အတန်းအစား Phablet ကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့က 7th ဇွန်လအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါဟွာဝေး P9 Plus အားတရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ပထမဆုံးမြတ်သောပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးပိုမိုကြီးမားဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ "ခပ်သိမ်းသောလမ်းအတွက်အပေါင်း" ဖြစ်ဖို့ဆို - ကစိတ်ပျက်မပါဘူး.
အခြားထုတ်လုပ်သူ '' စမတ်ဖုန်းများ၏ "အပေါင်း" ဗားရှင်းများနှင့်အမျှ, အ P9 Plus အားတစ်ဦးနဲ့တူလှပါတယ် P9 တက်လွ 5% တစ်ဦးတဿတူရှိ. သေးငယ်မှေးခငျြးအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ပါပဲင်, ကောင်းစွာလုပ်စမတ်ဖုန်း, အ P9 Plus အားညီတူညီမျှဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အချဲ့နေသော်လည်း.
အဆိုပါ P9 Plus အားသတ္တုကိုယ်ခန္ဓာမှပါဝါခလုတ်နှင့်အနည်းငယ်မောင်းသောအထည်ကိုတင့ပတ်ပတ်လည် flaring ထိုကဲ့သို့သောအနီရောင်အဖြစ်ကောင်းတဲ့နည်းနည်းထိရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာပိုကြီး 5.5in screen ကိုရှိပါတယ်, အနည်းငယ်ကြီး၏ဖြစ်ပါသည်, ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပိုလေး. ဒါဟာတဦးတည်းကိုအရောင်လာ – သလင်းကျောက်မီးခိုးရောင် – ပါဝါခလုတ်ကိုပတ်ပတ်လည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနီရောင်လေယူလေသိမ်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှု gunmetal မီးခိုးရောင်အရောင်.
အဆိုပါပြန်လည် P9 ထက်ချောနှင့်အနည်းငယ် rounded နှစ်ဖက်နှငျ့အတူရှိ၏, လက်တော်၌ရှိတကယ်ကောင်းတဲ့ခံစားရ. ဒါဟာတိုင်းနည်းနည်းကြည့်နဲ့ခံစားရမယ့်ပရီမီယံထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်း.
Samsung ရဲ့ 5.5in က Galaxy S7 Edge နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အ P9 Plus အား 1.4mm ကြီး၏ဖြစ်ပါသည်, 2.7လေးလံမီလီမီတာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် 5G, ဒါပေမဲ့ 0.7mm ပိုမိုပါးလွှာ, ထိုစဉ်က Apple က iPhone ကို 6S Plus အား 5.9mm ကြီး၏ဖြစ်ပါသည်, 2.6မီလီမီတာကျယ်ပြန့်, 0.3လေးလံမီလီမီတာပိုထူနှင့် 30g, လက်တော်၌အလွန်သိသာသောဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ခက်ခဲကိုင်တွယ်ရန်အောင်.
မျက်နှာပြင် 5.5in ကို full HD AMOLED ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသော-ရှာနေသော, ရောင်စုံနှင့်နက်ရှိုင်းသော inky လူမည်းရှိပါတယ်. 401ppi မှာ pin ကိုချွန်ထက် Samsung နှင့် Google ထံမှပြိုင်ဘက်အဖြစ်အတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး, Huawei ၏ကိုယ်ပိုင်ကြောင့် Nexus 6P အပါအဝင်, ဒါပေမဲ့အကြီးအကြည့်ရှုထောင့်ရှိပြီးအများဆုံးနှစ်သက်လိမ့်မည်.
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာများအရိပ် Google ၏ Android ထက် iOS ကိုပိုပြီးဆင်တူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
processor: octa-core ကို Huawei က Kirin 955
ရမ်: 4RAM ကို GB ကို
သိုလှောင်ခြင်း: 64GB ကို + microSD ကဒ်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 6.0 Emotion UI နဲ့ 4.1
ကင်မရာကို: 12အမတ်ကို dual နောက်ဘက်ကင်မရာကို, 8အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ကို Wi-Fiac, NFC ကို, AND, ဘလူးတုသ် 4.2, ကို USB-C နှင့် GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 152.3 x က 75.3 x က 6.98mm
Huawei ၏ power-saving settings ကိုနှင့်မော်နီတာပြဿနာ app များကိုဖော်ထုတ်ဘက်ထရီကြာကြာကြာရှည်ကူညီ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P9 Plus အားရှယ်ယာ P9 ရဲ့ Processor ကို, Huawei ၏ Octa-core ကို Kirin 955 chip ကို, ဒါပေမယ့် RAM ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်း 1GB 4GB ဖို့ကဆောင်ခဲ့ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တည်ဆောက် 64GB နှင့်အတူနှစ်ဆသိုလှောင်ရှိပါတယ်, ဆဲပိုပြီးထည့်သွင်းများအတွက် microSD card slot ရှိခြင်းစဉ်.
အဆိုပါ P9 Plus အား snappy ခဲ့သည်, ငါကမှာပစ်ချနှင့်၎င်း၏သေးငယ်မှေးခငျြးထက်အေးပွေးလေ၏အရာအားလုံးအားဖြင့် powered. ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလည်းကောင်းသည်, တည်မြဲ 38 Huawei ၏စမတ်ပါဝါကိုအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. စွဲချက်အကြားနာရီ, အသိပေးချက်များရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, 10 ဂီတနားထောင်ခြင်း၏နာရီ, ငါးနာရီ '' browsing နဲ့ app ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ဓါတ်ပုံနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့ထူးဆန်းပွဲချင်းပြီး. လူအများစုဟာဖွယ်ရှိစွဲချက်အကြားနှစ်ရက်ရလိမ့်မည်. အခြား, ပိုပြီးရန်လို power-saving Modes သာရရှိနိုင်ပါသည်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် app ကိုအသုံးပြုမှုမော်နီတာ, သောပေါင်းပင်ထွက်အာဏာဆာလောင်မွတ်သိပ် apps များကူညီပေးသည်.
အ P9 မတူဘဲ, အ P9 Plus အားအစာရှောင်အများဆုံးအခြားထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းနှင့်အညီ charging လည်းပါဝင်သည်, ဒါကြောင့်တက် topping တစ် power supply ချိတ်ဆက်နာရီမလိုအပ်ပါဘူး.
Emotion UI ကို 4.1
EMUI apps များမှအရုပ်ဆိုးနယ်နိမိတ်ကထပ်ပြောသည်နှင့် Android ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုမှစသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုသိသိသာသာငွေပမာဏကိုမှန်ကန်စေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P9 Plus အား Huawei ၏နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်အန်းဒရွိုက်ရှိတယ် 6.0 Emotion UI ကိုခေါ်တော် Marshmallow operating system ကို (EMUI 4.1). ဒါဟာအတိအကျ P9 ကဲ့သို့တူညီသောင်နှင့် Apple ၏ iOS နဲ့တူအောင်, အ homescreen မှာဖြစ်ဖို့ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့လူအပေါင်းတို့သည်ပလီကေးရှင်းအတင်းအကျပ်အပါအဝင်, စံက Android app ကိုအံဆွဲထဲမှာကွာတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်မဟုတ်.
တချို့ကကြည့်ရှုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်, အခြားသူများကိုမ. ဒါဟာ app များ၏တင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်, ကောင်းမြတ်သောအရာသည်, နှင့် Android ၏အခြားစိတ်ကြိုက်ဗားရှင်းအဖြစ်ဖောင်းပြည့်ဖြည့်မအဖြစ်ပေမယ့်စံက Android အတှေ့အကွုံသကဲ့သို့မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်.
EMUI အပေါ်ပိုမို 4.1, အဟွာဝေး P9 ၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
နောက်ကျောအပေါ်လက်ဗွေစကင်နာစျေးကွက်အပေါ်အမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးတိကျမှုတစျခုဖွစျသညျ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နောက်ကျောအပေါ်လက်ဗွေစကင်နာသည်အလွန်မြန်, တိကျမှုနှင့်ကောင်းစွာဖုန်းရဲ့အရွယ်အစားအဘို့အထား. မတစ်ချိန်ကငါ၏အစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ငါ့လက်ချောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့. သင့်အနေဖြင့်ဖုန်းကိုဖွင့်ကောက်နေမပါဘဲလက်ဗွေစကင်နာကိုသုံးပြီးဖုန်းကိုသော့ဖွင့်မပေးနိုငျ, သို့သော်.
တစ်ခြီးမှမျးသ loupe ပေါ်လာပြခန်း app ထဲမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်ခက်ခဲသည်သင်၏လက်ညှိုးကိုနှိပ်ပါ. အဆိုပါခက်ခဲသငျသညျချဲ့၏အဆင့်ကို သာ. တွန်းအားပေး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P9 Plus အားတစ်ဦးဖိအားထိခိုက်မခံတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိသည်ဖို့ပထမဦးဆုံး Android devices များကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သော Huawei ကစာနယ်ဇင်းထိတွေ့ခေါ်ဆို.
ယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေခံအားဖြင့်ကို iPhone 6S Plus အားအပေါ် Apple ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုထင်ဟပ်. တစ်ဦး Huawei က app ကို icon ပေါ်မှာခဲယဉ်းနှိပ်အချို့သောမြန်ဆန်လုပ်ရပ်နှင့် shortcuts တွေကိုပေါ်လာ. ခက်ခဲနှိပ်နေဆဲသင့်ရွေးချယ်မှု၏တစ်အရေးယူမှုမှချက်ချင်းသင်ကြာ, ထိုကဲ့သို့သောကင်မရာ app ကိုအတွင်း selfie mode ကိုမှဖြောင့်အဖြစ်.
အသုံးပြုသူများကိုလည်းအညွှန်းအိမ်မှာပုန်းရှောင်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျ, နောက်ကျောနှင့်မကြာသေးမီကမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင် apps များခလုတ်အသုံးပြုတိုးမြှင့်ဖိအားတွေနဲ့သူတို့ကို activate လုပ်ဖို့, သို့မဟုတ် apps များဖွင့်ဖို့ shortcuts တွေကိုအတိုင်းဘယ်ဘက်ထိပ်သို့မဟုတ်ညာဘက်ထောင့်ကိုသတ်မှတ်.
အဆိုပါပြခန်း app ထဲတွင်, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်ခဲယဉ်းနှိပ်ကိုသင်နှိပ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတိုက်ရိုက်အချိုးကျ zoom ကိုအတူခြီးမှမျးသ loupe တက်တတ်၏. ဒါဟာအလွန်တုံ့ပြန်မှုင်, အသေးစိတ်စစ်ဆေးဘို့နှင့်တစ်ဦးလျောက်ပတ်နည်းနည်း tool ကို, ဒါပေမယ့်လူအများစုကသူတို့ဓါတ်ပုံမှာခက်ခဲမကြည့်ဘူး.
စာနယ်ဇင်းထိတွေ့ Apple ရဲ့ 3D Touch ကိုကဲ့သို့တူညီသောပြဿနာများရင်ဆိုင်နေရ – ကထောကျပံ့သောအရာကိုသိရန်ခက်ခဲပါကဖွင့်, Third-party app ကိုထောက်ခံမှုမြင့်မားမဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ငါမည်သူမဆိုအသုံးပြုတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိမသေချာဘူး. ဒါဟာတက်ကြွစွာပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ပတ်ပတ်လည် icon တွေကိုရွေ့လျား၏လမ်းရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်အားပိတ်ပြီးနိုင်ပါသည်.
အန်းဒရွိုက်အနာဂတျတှငျဖိအားအထိခိုက်မခံ screen များအတွက်ဇာတိထောက်ခံမှု add စေခြင်းငှါ,, ငါမူကား, အရှင်ဝေးဆိုအကောင်အထည်ဖော်မှုအားဖြင့် unconvinced ရှိနေဆဲ.
dual camera ကို
နောက်ကျောအပေါ်ကို dual camera ကို setup ကို: တဦးတည်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကင်မရာ, တဦးတည်းအရောင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P9 တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်အဖြစ်နောက်ဘက်ကို dual camera ကို "Leica နှင့်အတူပူးတွဲအင်ဂျင်နီယာ" အတူတူပင်ကင်မရာစနစ်, နှင့်ကဲ့သို့သောကောင်းသောရှာဖွေနေပုံရိပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ပျော်စရာ၏အတော်လေးတွေအများကြီးဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါမိုနိုခရုမ်ကင်မရာအထူးချွန်ထက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဘာသာရပ်များ၏ညာဘက်မျိုးတကယ် sparkling စေသည်.
အဆိုပါ dual-ကင်မရာအပေါ်ပိုပြီးများအတွက်, အဟွာဝေး P9 ၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
အဆိုပါ front-facing selfie ကင်မရာပိုမိုမြန်ဆန်မှန်ဘီလူးရှိပါတယ်, တစ်ဦး, f-stop နှင့်ပိုမိုအလငျး၌ပေးနိုင်ပါတယ်ရာ 1.9, အဆိုပါ P9 ရဲ့ f2.4 နဲ့နှိုင်းယှဉ်. အဆိုပါခြားနားချက်သိသာဖြစ်ပါသည်. selfies ပြတ်သားကြည့်ရှု, တောက်ပနှင့်ပိုပြီးအသေးစိတ်. အဆိုပါအတော်လေးဆင်းရဲသောသူသည်အလင်းရောင်အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးအချို့ကိုထုတ်လုပ်, ငါသိမြင်ပြီးပြီအများဆုံးအသေးစိတ် selfies. အမျိုးမျိုးသောအလှတရား Modes သာလွန်းရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအားလုံးဖွင့်အသေးစိတ်ဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်.
အဆိုပါ Huawei ကကင်မရာ app ကိုတော်တော်လေးကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်အလိုအလျှောက် HDR mode ကို၏မရှိခြင်းကိုစိတျဆိုးနေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါပြန်လည် P9 ထက်အများကြီးချောမွေ့နှင့်ပွတ်ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်အချို့နဲ့အခြားသတ္တုစမတ်ဖုန်းအဖြစ်ချောမဟုတ်ပါဘူး
လျင်မြန်စွာထက်နည်းတစ်စက္ကန့်အတွင်းဓာတ်ပုံရိုက်ယူသော့ခတ်သည့်အခါနှစ်ချက်စာနယ်ဇင်း volume ကိုခလုတ်
Huawei ၏ app ကို-ထိန်းချုပ်မှု tools တွေကိုပါဝါယိုစီးမှုစသည်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့အလွန်ကောင်းနေတယ်
အနည်းငယ် Third-party apps များ Pre-installed လာ, ဒါပေမယ့်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်
ငါနေဆဲထိုကဲ့သို့သော Nova သို့မဟုတ် Google Now ဖွင့အဖြစ် Third-party launcher ကို install ချင်ပါတယ်အဆိုပါပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် app icon များပတ်လည်ရှိအရုပ်ဆိုးပူဖောင်းဖယ်ရှားပေးတဲ့ Third-party ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်
တစ်ဦးမှာ IR blaster သင့် TV ကိုထိန်းချုပ်ထိပ်၌ရှိပါရဲ့
အဆိုပါ Huawei က P9 Plus အားယခုအချိန်တွင်အင်္ဂလန်အတွက် Vodafone မှသီးသန့်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦး Pre-paid အကောက်အခွန်အပေါ်£ 500 မှာစတင်. Third-party လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့်စျေးနှုန်းများကွဲပြား.
နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ထို သေးငယ် P9 £ 449 ကုန်ကျ, Samsung ၏ Galaxy S7 Edge £ 639 ကုန်ကျ, ထို Google က Nexus ကို 6P £ 449 ကုန်ကျနှင့် Apple က iPhone ကို 6S Plus အား £ 619 ကုန်ကျ.
အဆိုပါ selfie ကင်မရာသည်ကြီး, နောက်ဘက်ကို dual camera ကိုပျော်စရာဖြစ်ပြီးဖုန်း၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်ပါသည်. မျက်နှာပြင်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်ရှာဖွေနေသည်ကောင်း, နောက်ကျောအပေါ်လက်ဗွေစကင်နာပွဲတစ်ပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်.
ဒါဟာနောက်ကျောကိုဖုန်းရရှိထားသူ့ Huawei ၏ EMUI င် – ကအများဆုံးအခြား Android ဗားရှင်းအဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ် သုံး. မရပါ. တချို့ကကြိုက်ပါလိမ့်မယ်, ကျွန်တော့် ... မရှိဘူး.
အကောင်းအဆိုး: ကြည့်ကောင်းသော, ကြီးမြတ်ခံစားရ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ selfie ကင်မရာ, အကြီးအ dual-နောက်ဘက်ကင်မရာ, တောက်ပလက်ဗွေစကင်နာ, လျောက်ပတ်သောဘက်ထရီသက်တမ်း, ကို USB-C ကို, IR blaster, microSD ကဒ်ထောက်ခံမှု
Cons: EMUI အတော်လေးခြစ်ရာမှတက်မဖြစ်, VR အဘို့ကောင်းသောမဟုတ်မျက်နှာပြင် (အနိမ့် resolution ကို), တစ်ဦး gimmick တစ်နည်းနည်းစာနယ်ဇင်းမထိ, ဗြိတိန်တွင် Vodafone မှသီးသန့်, ဘက်ထရီကိုဖြုတ်တပ်မ
အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူကို USB-C မှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဟွာဝေး P9 ပြန်လည်သုံးသပ်: ကြီးတွေယောက်ျားလေးများများအတွက်ရည်ရွယ်ပေမယ့်ကိုယ့် software ကိုအပေါ်ပျောက်ဆုံး
ဂုဏ်အသရေ 5x ပြန်လည်သုံးသပ် - ငွေကိုဖုန်းတွေအများကြီး, ဆငျးရဲဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုချကြကုန်အံ့
Google Nexus 6P ပြန်လည်သုံးသပ်: ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး phablet တယောက်
iPhone ကို 6S Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်: အိုင်ဖုန်းထက်အနိုင်နိုင်ပိုကောင်း6နောက်ထပ်
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဟွာဝေး, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← က Man v စက်: ကွန်ပျူတာကွတ်နိုင်သလား, ရေးပြီးကြှနျုပျတို့ကိုသန်းသည် သာ. ကောင်း၏ Paint? OnePlus3ဆန်းစစ်ခြင်း →